मल्टीप्लेयर खेल Minecraft आज दुवै वयस्कों र प्राथमिक विद्यालय युगको बच्चाहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ। अद्भुत आभासी संसार यति धेरै नशे की लत छ कि प्रयोगकर्ताहरू स्रोतहरू एकत्रित गर्छन्, घरहरू निर्माण गर्न र अन्य खेलाडीहरूसँग कुराकानी गर्दै। यद्यपि, कहिलेकाहीँ "म्यान्स्ट्राफ्ट" खेलमा लन्चर सुरुआत गर्दैन, जुन कुनै पनि व्यक्तिको लागि अप्रिय आश्चर्य हुन्छ। यस्ता विफलताहरूको कारणहरू के हुन् र तिनीहरू कसरी हटाउन सक्छन्?
प्राय: प्राय: लांचरको विफलताले यो तथ्यले गर्दा जावा सही काम गरिरहेको छैन भन्ने तथ्य हो। यस अवस्थामा, तपाईंले निम्न चरणहरू पूरा गर्नुपर्छ:
सबै जाभा घटकहरू हटाउनुहोस्। यो चरण पूरा गर्न सरल तरीका विशेष कार्यक्रम CCleaner को सहायता संग छ।
पीसी पुनः सुरु गर्नुहोस्।
Java पुन: डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन एक विशिष्ट अपरेटिङ सिस्टमको लागि उपयुक्त छ। तदनुसार, 32-बिट "विन्डोज" को लागी तपाईंलाई एक चालक चाहिन्छ र 64-बिट संस्करणको लागि - फरक फरक।
खेल पुन: लोड गर्नुहोस्। यसलाई राम्ररी अनलक गर्नुहोस् तपाईंको डेस्कटपमा।
ड्राइभमा रहेको लन्चरकर्तासँग फोल्डर मेटाउनुहोस्।
खेल सुरू गर्नुहोस् र दर्ता डेटा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
त्यसै गरी, यो कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको छ कि यदि मैनचेन्टल लन्चरकर्ता विन्डोज 10 मा सुरू गर्दैन भने।
यदि यसले मद्दत गर्दैन भने, त्यसपछि तपाइँ सिधा खेल असम्पीडित फाईलबाट प्रविष्ट गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ यसलाई डेस्कटपबाट गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै, यदि सुरुवातकर्ताले Java "घटक" को कारण खेलमा "मैन्युकcraft" मा सुरू गरेन भने तपाइँ एक सानो प्रोग्राम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यो रोमाञ्चक खेलको विकासकर्ताले प्रदान गरेको छ।
तर के हो यदि लन्चरकर्ता "म्यानुअल", र "जावा" मा सुरु हुँदैन भने विफलताको कारण होइन? यस अवस्थामा, तपाईंलाई कुन प्रकारको त्रुटि खेल दिन्छ भनेर राम्ररी पढ्न आवश्यक छ। यदि पाठ भिडियो कार्डलाई बुझाउँछ भने, सम्भवतः यो कारण कारण हो।
यस अवस्थामा, तपाइँ पहिल्यै अप्रचलित ड्राइभरहरू पुन: स्थापना गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। यो गर्नका लागि, तपाइँ पुरानो सफ्टवेयर मेटाउन आवश्यक छैन। यन्त्र प्रबन्धकमा जान र भिडियो कार्ड फेला पार्न पर्याप्त छ। त्यस पछि, दायाँ माउस बटनसँग यसको नाममा क्लिक गर्नुहोस् र ड्रप-डाउन बक्सबाट "ताजा गर्नुहोस्" चयन गर्नुहोस्।
यदि म्यानुअल रूपमा "रिभाउक्ट" ड्राइभरले काम गर्दैन, तपाइँ भिडियो कार्ड वा ल्यापटपको निर्माताको साइटमा जानुहोस् र पीसीमा आवश्यक स्क्रिप्टहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
ती व्यक्तिहरूका लागि चालक अपडेटका सबै सबटिलेटहरूमा तल्लीन गर्न चाहँदैनन्, विशेष उपयोगिताहरू विकसित गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, चालक बूस्टरले केवल एक बटन थिचेर सबै आवश्यक हेरफेर बनाउनेछ। कार्यक्रम अप्रचलित सफ्टवेयरको लागी देखिन्छ र यसलाई "पुन: पुन:" गर्दछ।
यदि लांचर खेल "मेनक्राफ्ट" मा सुरू गर्दैन, त्यसपछि यो खेल सर्भरको प्रदर्शित सूचीको कारण हुन सक्छ। यसका कारण प्रायः एक फायरवाल वा एंटीवायरस हो। यस समस्याको समाधान गर्न, तपाइँ "रक्षक" को सेटिङहरूमा डच गर्न आवश्यक छ र खेलको साथ डाइरेक्टरीलाई सुरक्षितको रूपमा परिभाषित गर्नुहोस्।
कुरा यो हो कि एंटिभाइरेज कुनै पनि ठेगाना बुझ्छ र एक खतरे को रूप मा सर्भर मा रीडायरेक्ट गर्दछ। त्यसोभए, तिनीहरू तिनीहरूलाई रोक्छन्।
यदि तपाईं असुरक्षित सूची (फायरवेलको सन्दर्भमा) ठेगानाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न भने, तपाईं अर्को विकल्प प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। 10 मिनेटका लागि सबै एंटीवायरस पर्दाहरू असक्षम गर्न आवश्यक छ र हेर्नुहोस् यदि स्थिति परिवर्तन हुन्छ।
साधारण गल्तीहरूको द्रुत समाधान
लन्चरकर्ता "म्यान्कcraft" मा चल्दैन किन कारणको लागि कारण एक ठूलो संख्या हुन सक्छ। तिनीहरू यहाँ सबै भन्दा साधारण छन्:
खेल अद्यावधिक पछि, प्रयोगकर्तालाई आवश्यक फाइलहरू डाउनलोड गर्न सोधिएको छ, तर तिनीहरू डाउनलोड हुँदैनन्। यस अवस्थामा, तपाइँ एंटीवायरस असक्षम गर्न आवश्यक छ, कागजात डाउनलोड गर्नुहोस् र म्यानुअल रूपमा अनप्याक गर्न आवश्यक छ।
लांचर ह्याङ्ग हुन्छ। यदि घडीको लागि खेल लोड र केहि पनि हुन्छ भने, तपाइँ जाँच गर्न आवश्यक छ कि आज रेभरर गेम बूस्टर वा भिसेभर प्रोग्रामहरू आज लोकप्रिय छन्।
कालो स्क्रीन। यस समस्यालाई हल गर्न, तपाईले बनावटहरू बदल्न आवश्यक छ, जसले स्वयंलाई बनावट परिवर्तन गर्दछ।
प्राधिकरण त्रुटि। केही प्रयोगकर्ताहरूले प्रासंगिक ज्ञान कार्यक्रम स्थापना गर्न सँधै सचेत रहन को लागी साइटहरु कुन दिन हेरिएको थियो। यो प्लगइन हटाउन यो सर्वोत्तम हो, किनकि यसले फायरवालको सिद्धान्तमा काम गर्दछ।
यदि कुनै पनि मद्दत गरेको छैन
यदि, "मेनक्राफ्ट" खेलमा माथि वर्णन गरिएको सबै हेरफेर पछि लन्चर सुरुआत गर्दैन, त्यसपछि सम्भवतः यो वास्तवमा स्क्यानरहरूको आक्रमण हो जसले आफ्नै लागि आधिकारिक खेल सर्भरहरू स्वैप गर्ने प्रयास गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा, यो केवल कम्प्युटरबाट Maincraft हटाउन मात्र हो। त्यस पछि, यन्त्रहरू भाइरसको लागि जाँच गरिनु पर्छ (हैकर्सले पहिले नै पीसीमा दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर खुल्यो) र खेल पुन: स्थापना गर्न सक्दछ।
अर्को विकल्प Reimage मरम्मत उपयोगिता डाउनलोड गर्न कोसिस गर्ने हो। यस कार्यक्रमले प्रणालीका सबै भागहरू विश्लेषण गर्दछ र सम्भावनात्मक गफहरू फेला पार्दछ।
आदेशमा भविष्यमा यस्ता समस्याहरू सामना गर्न, समयमा चालकहरू अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। यो विश्वसनीय सर्वरहरूमा मात्र प्ले गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ, जुन अरू प्रयोगकर्ताहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। यदि कसैले बोनसको गुच्छा प्रस्ताव गर्दछ भने, त्यसपछि त्यस्ता साइटहरूमा जानुअघि सोच्न धेरै पटक लायक छ।
यसको अतिरिक्त, कारणहरू एकदम कम हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि खेल बस तपाईंको हार्ड ड्राइभमा पर्याप्त स्थान होइन। यसकारण, यो सधैँ एक रिजर्भेसन राखिएको छ, खासकर जो प्राय: खेल्छन्।
कसरी "DotA 2" मा MMR बढाउने? "DotA 2" मा एमएमडी एकल चाँडो कसरी उठाउनुहुन्छ?
कसरी "म्यानपार्क" मा मेल कवच बनाउन र कसरी अन्य तरिकामा प्राप्त गर्ने
खेल हवेली भागो। पारित - 190 स्तर
गेम कन्सोल - यो के हो?
"मेजकोटर" मा एक हीरा खेती कसरी गर्ने भन्ने बारे विवरण
शब्द को रोचक इतिहास "जिन्स"
मनपर्ने कल गर्न षडयन्त्र
किन anther SHRUS आन्तरिक आवश्यकता?
क्षमता कसरी बलियो बनाउने?
Mohs मात्रा। को Mohs मात्रा मा कठोरता